सुनसान ठाउँमा युवतीले देखिन् फ्याक्ट्री, ‘प्रवेश निषेध’ लेखिएको थियो तर भित्र पसिन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सुनसान ठाउँमा युवतीले देखिन् फ्याक्ट्री, ‘प्रवेश निषेध’ लेखिएको थियो तर भित्र पसिन्
मस्को। अन्जान ठाउँको भ्रमण गर्ने रुसकी एक युवतीले यस्तो ठाउँ खोजिन् जहाँ उनी जानु हुँदैनथ्यो । यी युवतीले यस्तो काम गरिन् कि स्वयं रक्षा मन्त्रीले उनलाई चेतावनी दिनुपर्यो । लाना सेटोर नामकी ती युवती खिमकी शहर पुगेकी थिइन् । यहाँ सुनसान इलाकामा घुम्दै गर्दा उनले फ्याक्ट्री देखिन् । लानाका अनुसार नक्सामा यस्तो कुनै फ्याक्ट्रीबारे उल्लेख थिएन । नक्सामै नभएको कुरा वास्तविकतामा देखेपछि उनले त्यहाँभित्र गएर हेर्ने फैसला गरिन् कि आखिर यो कुन चीजको फ्याक्ट्री थियो ।
फ्याक्ट्रीभन्दा परै प्रस्ट शब्दमा चेतावनीसहितका बोर्ड लगाइएका थिए । बोर्टमा त्यहाँ प्रव्श निषेध लेखिएको थियो । तर लानाले मानिन् र एक सुरुङको बाटो भएर फ्याक्ट्रीमा घुस्न थालिन् । लाना अबेर राती आफ्नो टिमसँग यहाँ घुसिन् । उनलाई थाहा थियो कि यहाँ समातिँदा जे पनि हुन सक्छ तर यसको कुनै मतलब नगरी उनी टिमसँग एउटा सुरुङमा पुगिन् । यहाँबाट उनले फ्याक्ट्रीमा जाने बाटो भेटिन् ।
लानाका अनुसार फ्याक्ट्रीभित्र विशाल मेसिन लगाइएका थिए तर एउटा पनि गार्ड त्यहाँ देखिए् । लानाले टिमको साथमा त्यहाँका फोटो खिच्न थालिन् । कसैले बुझ्न सकिरहेका थिएनन् कि यी विशाल मेसिनबाट त्यहाँ के बनाइन्छ । लानाको टिम एउटा अग्लो टावरमा चढेजस्तै आटो चढ्दै त्यहाँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुगे । त्यहाँबाट देखिन दृश्य निकै आश्चर्यजनक थियो । लानाले देखिन् त्यो फ्याक्ट्री यति धेरै क्षेत्रमा फैलिएको थियो मानौं त्यो कुनै शहर थियो ।
एउटा विशाल बिल्डिङमा यो टिमले निकै विचित्र मेसिन देखे । छिट्टै उनीहरुको टिमले यो कुरा बुझे कि त्यो फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ । थाहा भयो कि यहाँ रकेट र रुसी सेनाका हतियारका पार्टपुर्जाहरु बन्छन् । यो देख्नासाथ लानाको टिमले बुझे कि अब उनीहरु त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ । लाना र उनको टिम बिहान हुनुभन्दा पहिल्यै त्यहाँबाट निस्के । लानाले आफ्नो यो अनौठो खोजबारे सामाजिक संजालमा शेयर गरिन् ।
उनले यो गोप्य ठाउँको फोटो समेत अपलोड गरिदिइन् । जब यी फोटो भाइरल भए त्यसपछि रुस सरकारको साइबर सेलले उनीमाथ निगरानी बढायो । रक्षा मन्त्रालयमा यो कुरा पुग्नेबित्तिकै हंगामा मच्चियो । केही दिनमै लानाको घरमा मन्त्रालयको नोटिस आयो । नोटिसमा प्रस्ट लेखिएको थियो कि यस्तो गल्ती फेरि गरे परिणाम निकै नराम्रो हुनेछ । यो नोटिस अरु कसैले नभइ स्वयं रक्षा मन्त्री दिमित्री रोगाजिनले लेखेका थिए ।